Efa ela ny mpikaroka momba ny sakafo dia nanaporofo fa ny fikarakarana henjana dia manome vokatra fohy, ary mety hanimba ny fahasalamanao. Izany no mahatonga azy io hisafidy ny hisafidy ny lanjany bebe kokoa. Ohatra, ho hitantsika hoe ohatrinona ny lanjalanjao mandritra ny 2 volana, ary inona no tokony hataonao mba hahazoana vokatra tsara. Ilaina ny manonona indray mandeha fa ny olona afaka mifehy ny tenany dia very maina.
Mba hitazonana izany fotoana rehetra izany dia tsy ilaina ny sakafo rehetra, satria ny sakafo dia mila mahazo sakafo avo lenta. Izany no antony tokony hamoronana ny menio, mifantoka amin'ny fitsipika fantatra amin'ny dietetics.
Ahoana no ahafahako mavesatra mandritra ny 2 volana:
Manomboka amin'ny ranom-boaloboka rano madio iray ianao, izay ahafahanao manisy tsimoka mofomamy. Izany dia hahatonga ny vatana hitsangana ary hanomboka ny metabolisma. It is recommended to drink 1 tbsp. rano mandritra ny 30 minitra. alohan'ny sakafo, izay hampihena ny fiankinan-doha . Mandritra ny fihinanana sakafo, ary koa aorian'izany dia tsy voatery izy io, satria hampihena ny famoahana izany. Ny habetsaky ny rano isan'andro, ho an'ireo izay te hiala amin'ny lanjany tafahoatra, dia 2 litatra.
Raha te-handanjalanja 15 kg ianao ao anatin'ny 2 volana, dia aza avela handrahoina, mamy, mofo, mifoka, sns, sakafo haingana ary sakafo hafa. Ny zavatra tokana azonao omena dia sombin-tsakafo mainty.
Ankoatra ireo sakafo telo lehibe dia ny fanampiana tsiranoka roa hanohana ny metabolism.
Mifantoha amin'ny fitsipika momba ny sakafo maraina - ny tena mahafa-po indrindra, ary amin'ny hariva, ny habetsaky ny kalitaon'ny sakafo dia tokony hampihenaina.
Zava-dehibe ny mihinana tsikelikely, mihinana tsara ireo singa. Izany dia noho ny fisian'ny famantarana momba ny satında ao amin'ny atidoha miaraka amin'ny lag, ka tsy overeat.
Ny tena lehibe dia ny enta-mavesatra, satria mila ny fatin-tsakafo. Raha tsy misy izany mampihatra any an-dalamby, ary manamboatra ao an-trano, tsara, na farafaharatsiny mandeha isanandro. Na dia ny fotoana hanaovana fampihetseham-po tsotra aza dia afaka mahita ny rehetra.
Mba hisorohana ny cellulite sy ny hamafisina ny hoditra dia afaka manatontosa fomba fanao amin'ny tarehy, ohatra, fametahana sy fametahana . Azonao atao izany ao amin'ny salon beauty sy ao an-trano.
Andao ho any amin'ny tena manan-danja indrindra - amin'ny fomba tena mahamiry haingana mandritra ny 2 volana. Ny zava-drehetra dia miankina amin'ny lanjany voalohany, saingy heverina fa ny fitsipika raha raisina 1-2 kg isan-kerinandro.
Ahoana no hampihenana ny habetsahan'ny vavony - ny safidy tsara indrindra
Ahoana no handoavana ny lanjany ao an-trano?
Tainkintana ny ririnina roapolo amin'ny fatiantoka
Sakafo ho an'ny menaka
Sary "apple" - ahoana ny fandaniana mavesatra ao amin'ny vavony?
Ohatrinona ny lanjanao mandritra ny 3 volana?
Ahoana no haka ny holatra Reishi noho ny fahaverezan'ny fahavoazana?
Ny teknikan'ny fofon'aina
Fanomezana ny raibeny ho an'ny andro nahaterahana
Karatra vaovao amin'ny tanany miaraka amin'ny ankizy
Doppler ultrasound amin'ny fitondrana vohoka - ny fitsipika
Jerosalema artichoke - toetra mahasoa
Hanina - votoatin'ny kaloria
Mpihira Adele dia natolotra mba hampanan-karena $ 26 tapitrisa
Nahoana isika no misy hety?
I Janet Jackson, 50 taona, dia nilaza voalohany momba ny maha-bevohoka azy
Poti-potsy miaraka amin'ny laisoa - lovia mahafinaritra mahatalanjona ho an'ny fianakaviana iray manontolo!
Tranombokim-pirenena any Malta
Mastic ao an-trano
Fanafahana sy famonoan-tena - inona no fahasamihafana ary inona no omen'ny famotsoran-keloka?
Ahoana no hanadiovana ny sofina ao an-trano?
Jamie Dornan dia nanohana ny vadiny Amelia Warner tao amin'ny Festival Festival Toronto
Adidas mpitsongo ny autumn
14 tsiambaratelo tsy manam-paharoa amin'ny Cleopatra, izay hanova vehivavy